दमकमा काँग्रेस सभापतिमा कस्ले मार्ला बाजि ? रोशन, प्रकाश र पर्शु सहित तीन जनाको दाबी | Prabhavkari News
दमकमा काँग्रेस सभापतिमा कस्ले मार्ला बाजि ? रोशन, प्रकाश र पर्शु सहित तीन जनाको दाबी
दमक/नेपाली काँग्रेसको आसन्न महाअधिवेसनको बिषयमा केन्द्रमा चर्चा शुरु भएसंगै स्थानीय स्तरमा पनि यसको प्रभाव शुरु भएको छ । यसभन्दा अघि प्रमुख प्रतिपक्षि रहेको काँग्रेस अहिले संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेको छ । यसले पनि नेपाली काँग्रेसको महाअधिवेसनलाई थप महत्वका साथ हेरिएको छ ।
दमकमा तीनजना युवा उम्मेद्वारहरुले मुख खोलेर उम्मेद्वारीको बिषयमा बोल्न थालेकाछन् । वर्तमान सभापति रोशन विष्टले एक पटक दोर्याउने आंकाक्षा राखेको बताईन्छ । उनले बुधमबार विपि कोइरालको स्मृतीमा भएको एक कार्यक्रममा आफ्नो उम्मेद्वारी रहने संकेत गरे ।
अर्का युवा नेता प्रकाश प्रशाईले पनि दाबि गरेकाछन् । अहिले सचिव रहेका प्रशाईले आफ्नो दर्विलो दाबी रहेको र दाबीबाट पछि नहट्ने संकेत गर्दै आएकाछन् । उनले आफु अब ब्याक नहुने भएकाले सहयोग गर्न भन्दै कार्यकर्तामाझ जान थालेको बताईन्छ ।
यसभन्दा अघि पनि नेतृत्व दाबि गरेका पर्शु रिजाल पनि दमक नगरमा काँग्रेस सभापतिका प्रमुख दाबेदार रहेकाछन् । सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै तीन जना नै उम्मेद्वारले सार्वजनिक कार्यक्रममा लचकता भने देखाएकाछन् ।
दमकमा अहिलेसम्मकै उच्च कोरोना संक्रमण, एकैदिन थपिए १ सय संक्रमित तर छैन निषेधाज्ञा पालना
झापामा कोरोना सक्रमणबाट मृत्यु भएका तीन जनाको एकै ठाउँमा एकै समयमा अन्त्येष्टि, दमकमा एकको मृत्यु